Isi > Gba Ígwè > Igwe kwụ otu ebe - chọọ nyocha
Igwe kwụ otu ebe - chọọ nyocha
.B.eku mgbapụtabụ oberemgbapụtanke ahụ emebere dabara n'imeetitima buru akuku nkeigwe kwụ otu eben'ihu triangle ruo mgbe ọ dị mkpa. Nnukwu na nha,etitinfuli na-arụ ọrụ nke ọma na ịkụnye taya karịa nfuli mini.19 nke Dec 2019
Daalụ maka ntughari taa anyị ga-enyocha Silca ImperoUltimate frame pump. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè agbanweela na nfuli ọkụ na kọmpụta Co2 ma ọ bụ obere nfuli ọkụ, nfuli ọkụ ka na-enye ọtụtụ uru. Mgbapụta ala abụghị naanị ịrụ ọrụ nke ọma na ịkụda taya karịa obere mgbapụta, ịkwesighi iwefu ego iji dochie mkpọchi CO2.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-achọ mgbapụta dị elu, Silca bụ ụlọ ọrụ amaara maka nfuli aka na igwe niile. Taa ha ghọrọ ka anyị lelee Silca Impero Ultimate ya, nke bụ nnukwu mgbapụta ya. Ugbu a nkwakọ ngwaahịa dị mfe.
Nweta ụdị mbupu kaadiboodu a na ụdị Silca. Obere ụda olu na-acha uhie uhie ma ọ bụrụ na ị maghị Silca, ha anọwo ihe karịrị otu narị afọ ma ha na-eme nfuli maka Tour de France na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè. Ugbu a, m ga-ewepụta ya na akpa ma anyị gafere ụdịdị ahụ.
Ere ọnụahịa bụ $ 165, ọ bụ ihe owuwu aluminom niile nke ejiri aka rụọ na USA nke bụ otu ihe kpatara ọ na-efu nnukwu ego. Ugbu a, e wuru ya ka o wee daa ka o wee nwee valvụ ọla na ihe ha kpọrọ FlexWing teknụzụ na nke ahụ bụ maka ugwu na-enweghị ntụpọ na igwe kwụ otu ebe. Ha nwere bumpers silicone iji kpuchido etiti ahụ site na ncha na dịka akụkụ nke ihe kachasị mma nke ngwaahịa a bụ Akwụkwọ ikike Silcashield bụ nke kachasị mma ha na-enye.
Ọ bụ a ndụ nkwa na-ekpuchi ndị ọzọ nile na kacha ngwaahịa. Yabụ ebe a anyị hụrụ ya dị mfe, ihe niile ị nwetara bụ obere ngwugwu, ị nweghị akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, ọ bụ naanị otu ibe, enweghị mkpịsị aka, enweghị nkwụnye na ọ bụ naanị valvụ Presta nke na-apụta na-enweghị brackets. awụnyere na igwe kwụ otu ebe. Ugbu a, ka anyị lelee ibu nke mgbapụta ahụ.
Ugbu a dị nnọọ ukwuu karịa mgbapụta ọkọlọtọ, na-atụle na 282 gram, Silca mara maka njirimara na-enweghị atụ ha na ikike na ikike ImperoUltimate abụghị otu. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ ihe nile-aluminom ahu na mma anodized-acha uhie uhie accents na Chuck. Elu àgwà roba echekwa na nsọtụ abụọ maka nkekọ eku na ọ fọrọ nke nta ọ bụla mbọn nke bụ na-akpali.
Yabụ ị ga - ahụ na ọ bụ ahụ ojii niile nwere ike ihu na Silca logo roba bumper ebe a na nke a bụ n’ezie ihe mgbochi ị nwere ike ịgagharị. Ọ na-ewe obere ike mana ị nwere ike ịhụ na ị nwere ike slide ya na nke ahụ na-egbochi ya ịmegharị ụfọdụ roba na nsọtụ na akara Silca n'ụzọ dị nro ebe a na akụkụ nke ọzọ nwere uhie anodized ahụ na obere Silca logo. Ihe na-adọrọ mmasị banyere ya bụ presta na enweghị n'ezie onye na-akwụ ụgwọ.
oyi igwe kwụ otu ebe
Ha na-eji gasket ukwu nke ukwu abuo wee mee ka ị wedata ala a ma nwee ezigbo mma. N'ụzọ doro anya, agbanyeghị, ịnweghị ike iji nke a jiri ihe ọ bụla ọzọ karịa valvụ Presta nke ọma, ị ga-enwe ụdị ume ọfụma site na inwe mmetụta nke adịghị mma. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-abụrịrị na ị ga-ahụ ọmarịcha ogologo dị ogologo nke na-ezobe n'azụ ọkpọkọ gị na ndị na-agba bọmbụ na obere nkwụsị na-akwụsị ebe a ị nwere ike ịnwe ọfụma.
Ọfọn, nke ahụ bụ ihe ha kpọrọ teknụzụ Flex-Wing ha, ọ bụ bumpers silicone ma ị nwere ike ịhụ site na imewe na ọ na-ewe otu sentimita abụọ na ọkara nke tubing. Anyị nwere ezigbo obi ụtọ ịwụnye nke a na igwe ịnyịnya carbon anyị, yabụ na ị gaghị enwe okpokoro ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ nke ọma karịa akpa tubes. You pụrụ ịhụ nke a ọmarịcha diamond imewe ebe a, n'ihi ya, ọ bụ nnọọ mgbanwe n'ihi ya, ọ na-adapts n'ezie gị igwe kwụ otu ebe mgbe ị slide ya.
Ya mere, ebe a anyị hụrụ mgbapụta arụnyere na Spezified Tarmac m dịka ị nwere ike ịhụ na enwere nnukwu oghere ebe a ka eriri tube nke tarmac gbagọrọ agbagọ ma yabụ nfuli ndị a ka mma maka igwegharị igwe kwụ otu ebe, mana ọ ka na-arụ ọrụ ma ị nwere ike -ahụ na ọ bụ n'ezie nke ụzọ mgbe ụgbọala si n'akụkụ. Nlele kachasị elu ị pụghị ịhụ mgbapụta a n'ihi na dayameta dị obere karịa ọkpọkọ n'onwe ya. A bụ ihe a nso lee anya na Lining n'akụkụ otú i nwere ike n'ezie mata uhie pụta ìhè na ọ dabara n'ezie ọma.
Ya mere ị nwekwara ike ịhụ mgbe ị na-agagharị na enweghị ọtụtụ egwuregwu na n'ihi ọnụọgụ roba na-egbochi ebe a. Ọ gaghị emebi etiti gị. Lelee anya n'akụkụ aka.
na-arụ ọrụ ọnwụ ọnwụ
Ọ dịkwa arched ya mere, ọ dabara adaba mara mma megide carbon eriri etiti, ọ bụ ezie na nke a abụghị ọdịnala gburugburu tube na dị ka ị pụrụ ịhụ mgbe ị na-akpali ya, ọ dịghị akpali n'ezie n'okporo ụzọ. Ga-anụ obere rattle ma ọ bụrụ na ị na-ikesiike a niile, ma ọ bụghị na ọ bụ ezigbo mma na ị pụrụ ọbụna ịhụ na ụfọdụ ike na mgbapụta mụ. N'ebe a, anyị nwere mgbapụta Topeak TurboMorph G dị ka isi ihe atụ.
Ọ bụ mgbapụta igwe kwụ otu ebe, mana o nwere ugwu a mara mma ka ị nwee ike iji ya dị ka mgbapụta etiti, mana ị nwere ike ịhụ na ọ bụrụ na ị nwere eriri Velcro ebe a, ọ dị ọtụtụ karịa ma ọ nweghị ihe dabara na ya , ya mere maa bụghị nke ezigbo dị ka Silca. Nke a bụ ihe ileba anya na topeak. You nwere ike ịhụ eriri Velcro ebe a na-ehichapụ ogwe osisi na oge na-emebi agba agba gị na nke a bụ ihe na-ewepụ uwe mwụda mnya igwe ndị ọzọ, yabụ otu ihe mere ị ga-eji zere ụdị atụmatụ ndị a na-eji ihe eji eme ihe na ọghọm nke Silca pump.
Ihe na-amasị anyị na ya bụ na ọ na-ejupụta ngwa ngwa. Ọ bụ nnukwu mgbapụta nke na-arụ ọrụ nke ọma na ọrịa strok ọ bụla. Ọ na-kpuchie anyị keukwu Silca Shield ndụ Akwụkwọ ikike, n'ihi ya, ọ bụ a mgbapụta nke ga-maa-adịru gị igwe kwụ otu ebe.
O nwere nnukwu ihe eji eme ihe a niile ka ị ghara ichegbu onwe gị maka akụkụ plastik na-agbaji ma ọ bụ na-emebi emebi. Offọdụ n'ime ala na mgbapụta ahụ bụ eziokwu na ọ dị oke ọnụ ma dịkwa nfuli nfuli ala ndị ọzọ. Ihe mkpuchi mkpọchi Silca a siri ike ịhazigharị, ọ na-ewe ọtụtụ ike iji dọpụta ya na azụ.
A sị ka e kwuwe, ọ ga-adị mma ịnwe nlele nrụgide, n'ihi na ma ọ bụghị na ị na-ekpuchi taya site na imetụ aka, nke nwere ike isi ike ma ga-enye mgbapụta ahụ 8.9 site na isi 10. Ọ bụ igwe mgbapụta dị oke ọnụ, mana ọ wuchara ya ka ọ daa ma nwee akwụkwọ ikike iji kwado ya.
Daalụ maka ilere nyocha a, echefula ịmasị na ịdenye aha. Nwere ike ịchọta ọdịnaya ndị ọzọ n'aka anyị na weebụsaịtị anyị na thesweetcyclists.com ma soro anyị na Instagram na @TheSweetCyclists.
Nke a bụ The Sweet Cyclist na-echetara gị ịnụ ụtọ njem ahụ!
Gịnị bụ ihe kasị mma bike etiti mgbapụta?
Anyị na-ahọrọ nkekacha mmaObereigwe kwụ otu ebenfuli
Blackburn Airstik Anyvalve minimgbapụta.
LifeLine Roadrụ Ọrụ Minizọ ObereMgbapụta.
Lezyne Carbon Drive Lite Oberemgbapụta.
Topeak Microrocket AL minimgbapụta.
iPump Twist minimgbapụta.
Lezyne Digital Road Drive minimgbapụta.
Crank Brothers Klic Hp nlele na co2 minimgbapụta.
Topeak Mini Morph G minimgbapụta.
Kedu otu m ga-esi ahọrọ mgbapụta igwe kwụ otu ebe?
Namgbapụtagịhọrọkwesịrị ijikọ ma ọ bụ gafere ikuku ikuku ekwupụtara na taya gị nwere ike ijikwa. Ọ bụrụ namgbapụta simax ikuku ikuku dị oke ala, ị gaghị enwe ike ịfụ taya, n'ụzọ zuru okemgbapụta. Rịba okporo ụzọ ahụ amaigwe kwụ otu ebetaya na-achọkarị psi dị elu karịa ugwu ma ọ bụ ngwakọanyịnya igwe.
Kedu ka mgbapụta igwe kwụ otu ebe si arụ ọrụ dị ka mgbapụta agụụ?
N'adịghị ka ọtụtụ pistinnfuli, kamgbapụta igwe kwụ otu ebena-eji disk rybaị dị ka pistin ma dịka otu n'ime valvụ ego. (1) Gbanwee diski pistin na diski igwe nke na-akwado ya, nke mere na ọ na-emechi akara na mgbatị (ịmepụtaagụụ) ma na-agbadata na downstroke (ikwe ka ikuku gburugburu ya na nke cylinder).
You chọrọ mgbapụta pụrụ iche maka valvụ Presta?
Iwusi aPresta valvụ gị'Llmkpaikuku mgbe niilemgbapụtana apụrụ ichenkwụnye. Ihe nkwụnye ahụ na-agbanwe nke ọmaPresta valvụka a Schradervalvụka ọ wereị nwere ikejiri ikuku ọdịnalamgbapụtaịgbanye ya.
There nwere igwe nfuli igwe dị iche iche?
* Ihe ọma bụ na ọtụtụnfuli igwe kwụ otu ebenwee abụọụdịnke nozzles, ndị kachasị oge Schrader na Presta, ebe ị nwere ike ịhụ Presta-naanị, na Presta-Dunlopnfulin'ụzọ. Okporo ụzọmgbapụta igwe kwụ otu ebe- Presta valvụ, adịkarịghị a Schrader valvụ. Ngwakọmgbapụta igwe kwụ otu ebe- Presta na Schrader.
Kedu ka m ga-esi gbaba mgbapụta igwe kwụ otu ebe m na mgbapụta agụụ?
N'ụzọ bụ isi, ihe niile ị ga - eme bụ ịgbanwe pistin ahụ wee chọpụta valvụ n'imemgbapụtakaimeọ na-amị ikuku kama ịfụ ya. Nke ikpeazumgbapụtaga-enwe ike iweghara 75% nke ikuku site na ihe, yana ihe karịrị 11 pound kwa square nke anụ ọhịa ike.Ọgọst 22 2010
Kedu nke ka mma Schrader ma ọ bụ Presta?
Gbazinyevalves dị mfe imipu karịaSchrader, n'ihi na ha enweghị valvụ mmiri iji merie. Na warara rim, clincher na taya na-ahapụ ezughi oke ohere n'etiti taya chaplet maka ibuSchradervalvụ. Na ntule ndịicheSchradervalves bụ ihe siri ike, nke a na-eji eme ihe ụwa niile, ma nwee isi nwere ike iwepu.Mar 26 2007
Nwere ike ịmịpu valvụ Presta na-enweghị nkwụnye?
N'ihi na ha abụọvalvụụdị dị iche iche,hachoro isi abuo di iche namgbapụta- ma ọ bụ, dị ka ọ na-adịkarị, isi na-agbanwe agbanwe. Yabụ,ị nwere ike'Jiri aSchrader-isimgbapụtakaafanye valvụ Prestaọkpọkọna-enweghị nkwụnye, na-abụghị ọrụ ga na-arụ ọrụ mgbe niile. g.
Mgbapụta m bụ Presta ka ọ bụ Schrader?
.B.Gbazinye-n'imemgbapụtanwere roba gasket naiheisi, ma ọ bụ chuck, nke ahụ ga-adaba na gburugburu aGbazinyevalvụ ma ọ bụghị aSchrader. .B.Schrader-n'imemgbapụtanwere ntụtụ naiheetiti nkeihechuck ka iwendị Schradervalve nke ego. Ọ bụrụ na ị gbalịa itinye ya na aGbazinyetube, ọ gaghị adaba.Mar 1 2021
Kedu valvụ ka mma Presta ma ọ bụ Schrader?
Ndabere prestadị mfe imipu karịaSchrader, n'ihi na ha enweghịvalvụmmiri iji merie. Na warara rim, clincher na taya na-ahapụ ezughi oke ohere n'etiti taya chaplet maka ibuIhe ntụ Schrader. Na ntule ndịicheIhe ntụ Schraderna-esiwanye ike, nke ụwa niile na-eji eme ihe, ma nwee isi mbugharị ngwa ngwa.Mar 26 2007
ritchey okporo ụzọ mgbagha nyocha
Enwere ike itinye mgbapụta na igwe kwụ otu ebe?
Ngwongwo mgbapụta na-aghọwanye ihe a na-ahụkarị na mmemme dịka North American Handmade Bicycle Show (HAHBS). Mgbapụta Frame nwekwara ike ịbụ obere iwe banyere igwe kwụ otu ebe ha ga-adabaghị. A na-edebe ha nke ọma maka okporo ụzọ na gravel frames na kpochapụwo gburugburu akpa, ma ụfọdụ ụdị nwere ike dabara ụfọdụ ụfọdụ ọhụrụ aero-ekara okpokolo agba, kwa.
Kedu ihe ị nwere ike iji mgbapụta etiti mee?
Mbadamba ikuku abughi ihe na-eme ka ọ dị elu ma ọ bụ nke dị fechaa, mana nke ahụ na-eme ka ị gbasie ike. Mgbe i wepụrụ ya na igwe kwụ otu ebe, ị ga-enwe mmetụta ọsọ ọsọ. N'elu ihe a niile, ọ bụ ngwa bara uru maka asọmpi kọfị na-akwụsị na-asọmpi ma ọ bụ egwuregwu nkịtị nke T-ball-kalama mmiri.
Kedu ụdị onye mgbapụta mgbapụta maka igwe kwụ otu ebe?
PRO ọgba tum tum Bicycle mgbapụta njide | Fechaa na Ike - Bicycle Frame Mounted Black Compatible Bracket Clip - maka nfuli 1.0 nke anụ ọhịa na dayameta. . . . . . . . . . .